‘जीरो’ पछि अनुष्काले किन लिएकी थिइन् फिल्मबाट ब्रेक? खुलाइन् कारण « Khabarhub
‘जीरो’ पछि अनुष्काले किन लिएकी थिइन् फिल्मबाट ब्रेक? खुलाइन् कारण
१४ श्रावण २०७६, मंगलबार
मुम्बई – अनुष्का शर्मा सन् २०१८ मा खुबै व्यस्त रहिन् । उनका चार फिल्म एकै वर्ष रिलिज भए । तर, डिसेम्बरमा रिलिज भएको फिल्म ‘जीरो’ पछि उनले कुनै फिल्म साइन गरिनन् । यो फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप भएको थियो ।
बीचमा केही समय चर्चा चलिरहेको थियो कि, अनुष्काले बलिउड छोड्दैछिन् । तर यो खबर गलत साबित भएको छ ।
फिल्मफेयरमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा अनुष्काले फिल्मबाट ब्रेक नलिने खुलाइन् । उनले भनिन्, ‘जीरो रिलिजपछि म केही महिना फुर्सदमा बस्न चाहन्थेँ ।’
उनले आफू एकपछि अर्को गर्दै फिल्ममा काम गरिरहेका कारण समय मिलाउन गाह्रो भएको र सोही कारण फिल्मबाट केही समयका लागि ब्रेक लिएको बताइन् । ‘मैले समय मिलाएर विराटलाई भेट्थेँ, मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि, मैले धेरै नै काम गरेँ ।’
उनले आफूलाई २ महिना ब्रेक चाहिएकाले आफ्नो टिमसँग पनि सल्लाह गरेको बताइन् । उनले फिल्मबाट ब्रेक लिएको बताए पनि अब कुन फिल्ममा काम गर्दैछिन् भन्ने खुलाइनन् । फिल्मबाट ब्रेक लिँदा अनुष्काले आफ्नो पूरै समय विराटसँग बिताएकी थिइन् । विराट र अनुष्काले सन् २०१७ मा बिहे गरेका थिए ।